Fampitahana: iPhone 5S vs 5C vs 5 vs 4S vs 4 vs 3Gs vs 3G vs 2G | Vaovao IPhone
Nacho | | Fantson'ny IPhone
Azo antoka fa maro amintsika no maniry hanana fanangonana modely iPhone rehetra Navoakan'i Apple, noho izany izahay dia afaka nanao fampitahana toa ilay hitanao tao amin'ny horonan-tsary izay mitarika ity lahatsoratra ity.
Afaka jerena ao ny ora ampiasain'ny tsirairay amin'ireo terminal lahasa fototra toy ny famonoana, fanidiana, na famoahana pejy Web. Fampitahana somary fohy saingy manome antsika angona mahaliana.
Ny zavatra lojika dia ny fieritreretana fa ny iPhone 5s no haingana indrindra ary tsara, tsy misy isalasalana fa marina izany fa mitandrema, misy ireo terminal efa antitra izay mihidy ary mandeha ao anatin'ny fotoana fohy kokoa. Tsy hoe haingana kokoa izy ireo, fa manana kinova taloha amin'ny iOS izay tsy misy fampiasa firy, izany hoe, loharanom-pahalalana vitsy kokoa izay tsy maintsy manomboka mandritra ny dingan'ny herinaratra na hikatona mandritra ny dingana famonoana herinaratra.
Mazava fa raha manamarina ny fotoana ilantsika ny fanokafana rindranasa iray na handefasana horonantsary miaraka amin'i iMovie isika, ilay mpandresy lehibe dia ny iPhone 5s misaotra ny processeur Apple A7 izay manangana ny maritrano 64-bit. Raha ny momba ny iPhone 5 sy ny iPhone 5c, dia samy tokony hitovy ny fahombiazany satria mitovy ny fitaovana entin'izy ireo. Amin'ny sisa amin'ireo terminal, miharatsy ny fitaovana rehefa mihetsika hatrany amin'ny taranaka mifandimby isika.
Fanazavana fanampiny - IOS 7 miadana amin'ny iPhone 4? Andramo ity fikafika ity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » Fampitahana haingana: iPhone 5S vs 5C vs 5 vs 4S vs 4 vs 3Gs vs 3G vs 2G
Crazy4Mac dia hoy izy:
Iza no afaka, fanangonana toy izany!
Valiny amin'ny Crazy4Mac
Izaho dia afa-po fotsiny tamin'ny 5s 😛
Inona isika ary iza isika.
Ny tsapako dia hoe zara raha niova amin'ny fomba estetika izy hatramin'ny iPhone 1, heveriko fa efa ilaina ny fanovana satria efa lasa lany andro amin'ny resaka bika izany.
Manana azy rehetra aho afa-tsy ny faha-5 ...